Sonos ga-ebuli ọnụahịa nke ngwaahịa ya site na 25% na United Kingdom | Gam akporosis
Ọ bụrụ na ị na-agụpụtara anyị United Kingdom na ị na-eche ị nweta ụfọdụ ngwaahịa, ị ga-aka ọsọ ọsọ ma ọ bụrụ na ịchọghị ịkwụ ụgwọ ruru otu ụzọ n'ụzọ anọ nke ọnụahịa ha nwere ugbu a.
Companylọ ọrụ Somos, ọkachamara na igwe okwu, ekwupụtala na ezube ịbawanye ọnụahịa nke ngwaahịa ya na UK n'ihi Brexit na mbibi na-esochi nke mgbanwe mgbanwe.
Ga-abụ na-amalite na February 23 ọzọ mgbe ụmụ amaala UK ga-akwụ ụgwọ ihe ruru a 25 pasent karịa maka ngwaahịa ndị Sonos mere. Nwere ike iche n'echiche ihe kpatara ọnụahịa ahụ na-abawanye: n'ihi Brexit, paụnd ndị Britain agbadala ala na dollar, yabụ Sonos ga-ewelite ọnụ ahịa iji kpuchie mfu ya.
Lọ ọrụ ahụ egosipụtala site na nkwupụta na “N’ọnwa ndị na-adịbeghị anya, agbanweela mgbanwe dị ukwuu na ọnụego mgbanwe dollar US na GBP. N'ihi ya, ọnụ ahịa anyị ugbu a aghọwo nke na-enweghị ike ị nweta, yana, dị ka ọtụtụ ụlọ ọrụ ndị ọzọ, anyị ga-abawanye ọnụahịa nke ngwaahịa niile dị na paụnd sterling.
Sonos ekesaala ihe ga ọhụrụ ohuru ga- nke ngwaahịa ya nke ga-aba uru site na February 23. Egwuregwu: 1 obere okwu ga-efu £ 199, mmụba nke £ 30 site na ọnụahịa ya ugbu a. Nnukwu Play: 5 ga-ahụ will 70 mmụba na £ 499, ebe Playbar na Sub ga-ahụ ka ọnụ ahịa ha rịrị elu site na £ 100 ruo £ 799 ma e jiri ya tụnyere £ 699 ugbu a.
Sonos ọbụghị ụlọ ọrụ izizi welitere ọnụ ahịa ya n'ihi Brexit. Onye na-eme Smartphone OnePlus na onye na-arụ ụgbọ eletrik Tesla, n'etiti ndị ọzọ, ahọrọkwala ụzọ a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Sonos bulie ọnụahịa nke ngwaahịa ya site na 25% na UK
HMD Global setịpụrụ Nokia 6 na 3 ọhụrụ gam akporo ọhụrụ na MWC 2017